Ukudibana kokuFunyanwa kwe-AT & T: Ithetha ukuthini iWarner, i-HBO Max kunye nokuFumanisa + - Ezintsha
Eyona Ezintsha I-WarnerMedia-Discovery Merger Ngaba zii-AT & T's zakutshanje zeTitans
I-WarnerMedia-Discovery Merger Ngaba zii-AT & T's zakutshanje zeTitans
Masizame ukuqonda intshukumo ye-AT & T yokudibanisa iWarnerMedia kunye nokuFumanisa.Ifoto-umzekeliso: Umjongi (ngeBudrul Chukrut / Imifanekiso ye-SOPA / i-LightRocket nge-Getty Izithombe)
thenga imbewu embizeni eCanada
Kwinyanga ephelileyo, sibaleke isiqwenga esichaza ukuba iimfazwe zokusasaza ezihlanganisiweyo ziya kugqitywa njani Ukudityaniswa kwexesha elizayo, ukudityaniswa, kunye nokufunyanwa . NgoMvulo, kulandela ukuhleba ngeempelaveki, i-AT & T kunye neDiscovery Inc. babhengeza ngokusesikweni iinjongo zabo zokudibanisa iiasethi zabo zokuzonwabisa kwisivumelwano esiya kudibanisa iimveliso ezinje nge-CNN, TBS, TNT, HGTV, Food Network, Discovery Channel, Warner Bros. ' Isitudiyo semovie, kunye neenkonzo zokusasaza iHBO Max kunye nokuFumanisa +. Ikwatshatisa namalungelo ezemidlalo eWarnerMedia aseMelika anje nge-MLB, NBA kunye no-Matshi Madness ngokuFumanisa i-titan yezemidlalo yamazwe aphesheya.
Ngokwentetho yemithombo yeendaba edibeneyo, iinkampani zidibanisa iiasethi ukuze zenze inkulumbuso, inkampani ezimeleyo yolonwabo lwehlabathi. Injongo yeyesifuba semfazwe esinzulu seWarnerMedia kwaye IP iprofayile ephezulu Ukutshatisa neFinfovery's footprint kwimanyano eyinzuzo macala.
Inkampani entsha iya kuba nakho ukutyala imali kwimixholo engaphezulu yeenkonzo zayo zokusasaza, iphucule ukhetho lwenkqubo kuyo yonke intambo yokuhlawula umabonwakude kunye nejelo losasazo, kwaye ibonelele ngamava evidiyo amatsha kunye nokukhethwa kwabathengi, kukhutshwa ufundisiso.
Izabelo ze-AT & T sele zitsibe malunga neepesenti ezi-4 kunye nokuFunyanwa ukuya kwi-13%. Nangona kunjalo, kweli xesha langoku, asikabi nalo nofifi lokuba oku kuya kuthetha ntoni kuwe, mthengi kunye nelungu labaphulaphuli. Ke makhe siqwalasele iingongoma eziphambili zokuthetha ukuze siqale ukuqonda ukubuyela umva komzi mveliso.
Yiyiphi into ekuthiwa yi-AT & T yeWarnerMedia kunye neDiscovery
I-WarnerMedia kunye ne-Discovery zidityaniswa kuyo yonke into yesitokhwe eya kuthi ibone i-AT & T ifumana i-43 yezigidigidi zemali ezinkozo, ukhuseleko lwamatyala kunye nokugcinwa kwetyala likaWarnerMedia. Abanini bamasheya be-AT & T baya kuthi emva koko babe ngabanini beepesenti ezingama-71 zenkampani esandula ukudityaniswa, ngokuFumanisa okungumnini we-29% eseleyo. Isivumelwano kulindeleke ukuba sivale, kulindwe imvume, ngo-2022.
Inkampani edityanisiweyo kuqikelelwa ukuba ibe ne-52 yezigidi zeerandi kwingeniso ngo-2023 kwaye ubunkokheli buthi kuzakubakhona i-3 yezigidigidi zeerandi kwiindleko zonxibelelwano ngokudibana, THR . I-AT & T iya kuthi ke iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde emva kokumila, kwaye i-T & T iya kugxila kwakhona kwishishini layo le-telecom: i-5G kunye ne-fiber broadband.
Kwinkomfa yokujoyina oonondaba ngoMvulo kusasa, u-CEO we-Discovery u-David Zaslav uthe inkampani edibeneyo izakuchitha malunga ne-20 yezigidigidi kumxholo ngonyaka. Ukubhekisa phambili, iNetflix kulindeleke ukuba ichithe ngaphezulu kwe- $ 17 yezigidigidi kumxholo ngo-2021. Akukacaci ukuba inkampani entsha iza kujonga ukudibanisa iinkonzo zayo zokusasaza, i-HBO Max kunye ne-Discovery +, okanye idibanise kwi-mega-streamer enye. Okungakumbi ngezantsi apha.
Ngaba iziko elitsha leWarnerMedia-Discovery liya kugcina abasebenzisi ngaphakathi kokusasaza kwendalo kunye nebhulorho phakathi kweMidlalo yeTrone kunye neFlip okanye iFlop?
Kutheni usenza esi sivumelwano? Kubaqalayo, isikali sibalulekile kwi Amehlo eWall Street , nangona indawo yezemali yehlabathi ihlala ixabisa ubungakanani obukhulu ngokufumana ukuthengwa kweqhinga. Kodwa kwicandelo lokusasaza apho iNetflix (208 yezigidi zababhalisi behlabathi), iDisney (i-159 yezigidi) kunye neAmazon (i-200 yezigidi zabasebenzisi beVidiyo yeNkulumbuso) ezivelisa ingqokelela ye-D2C yevolumu iyonke, ukudityaniswa kweWarnerMedia kunye nokuFumanisa kwenza ingqiqo yeqhinga. Iimfazwe zokusasaza sele zixinene kakhulu ngamajoni. Ukuhlengahlengiswa kwiyunithi enye enqatyisiweyo kunye namandla ahambelanayo kubanika umfanekiso ophucukileyo kwimpumelelo kunababini okhuphisana nabo.
Ngokwe- Amaxesha ezeMali Inkampani edibeneyo iya kubamba ixabiso eliqikelelweyo le- $ 150 yezigidigidi. Ixabiso lokuzonwabisa libandakanya ekubaleni kwayo imali yentengiso yenkampani kodwa kunye nexesha elifutshane kunye netyala elide kunye nayo nayiphi na imali kwimali yenkampani. Ukuthelekisa okungahambelaniyo, abakhuphisana neNetflix (i-218.76 yezigidigidi zeedola) kunye neDisney ($ 315.31 yezigidigidi) babambe iminqwazi ebalulekileyo yentengiso njengalo mbhalo.
I-AT & T ithathe indlela yesiphithiphithi esiya koku kudibana
Ukuqonda ngcono isiphithiphithi esikhoyo ngoku, kunganceda ukuba ube nokuqonda ukuthengiselana kwakutsha nje kwe-AT & T, ngakumbi phantsi kwe-CEO yangoku uJohn Stankey. Njengamaxesha onke, umxholo ubalulekile.
Kule minyaka mithandathu idlulileyo, i-AT & T yenze uthotho lweentshukumo ezenzakalisa inkampani. Ngo-2015, uStankey (owayengu-CEO we-AT & T Entertainment kunye neNkonzo ye-Intanethi) wakhokela ekufumaneni iDirecTV nge-67 yeebhiliyoni zeedola, kubandakanya ityala. Ukusukela ekuthengweni, isixa semali ye-TV esihlawulelweyo siye sahla saya ezantsi kwinto engenakuphinda ibuye.
Kunyaka emva koko, i-AT & T yaqala ukufunyanwa kwayo nguTime Warner, eyathi yaphikisana neSebe lezoBulungisa. Emva kokuphumelela eli tyala ngo-2018, inkampani yakhupha i-85 yezigidigidi zeedola yaphinda yayibiza ngokuba yiWarnerMedia. Kwi-2020, inkxalabo yomtyali mali malunga ne-AT & T's $ 150B umthwalo wamatyala kunye nokuzama ukukhuphisana kwimidiya yolonwabo kuvakala kuyo yonke iWall Street. I-AT & T yayiyeyona nkampani iphambili ene-footprint yaseHollywood ulahlekelwe lixabiso lentengiso ngaphezulu kweenyanga ezili-18 ezidlulileyo.
UStankey wanyuselwa kwi-AT & T CEO ngo-Epreli 2020. NgoFebruwari 2021, inkampani yathengisa ishishini layo le-DirecTV kwilahleko enkulu kwisivumelwano se-7.8 yezigidigidi nge-TPG Capital. Ngoku, kwiminyaka emithathu emva kokufumana iWarnerMedia, i-AT & T iyayijikeleza $ 43 yezigidigidi, okanye phantse isiqingatha sento ebiyihlawule kwasekuqaleni. Eyona ilungileyo.
Zimbini iindlela zokujonga oku kushukuma kwakutshanje:
Eyokuqala injengokunikezelwa kwemvume ukuba i-AT & T ifundise gwenxa amandla ayo okusebenzisa iiasethi zokuzonwabisa zeWarnerMedia kunye ne-HBO Max ukuqhuba ishishini kwimizamo yalo ephambili yomnxeba. I-WarnerMedia khange ibonelele ngenzuzo eyoneleyo phantsi kwe-AT & T yokunciphisa inkxalabo yeWall Street kunye nepivot ebiza kakhulu ekusasazeni ibe sisiphazamiso endaweni yokongeza kwimisebenzi ephambili ye-AT & T. Ukusuka ngaphandle, kulula ngokulula ukujonga le ntshukumo njengokungaphumeleli kwecandelo lemveliso.
Umbono oqinisekileyo kukuba indibaniselwano edityanisiweyo apho i-AT & T yeyona ndawo inesabelo esikhulu kunazo zonke ingekuko ukuhambisa iflegi emhlophe, kodwa lithuba lokudala ixabiso ngakumbi kubatyali mali ngaphandle kwe-AT & T. Ngokwangaphambili owayesebenza eViacom kwidijithali yemithombo yeendaba kunye nomsunguli wencwadana yeendaba IPARQOR UAndrew Rosen, i-ecosystem ye-AT & T khange ibonelele ngohlumo kodwa ishishini le-HBO Max's Retail DTC. Ke iWarnerMedia kunye ne-HBO Max kunokuba ngcono ngaphandle kwendalo ye-AT & T yokukhula kunye nokuziqhelanisa kune-AT & T.
Inkqubo ye- izibonelelo ezinokubakho ngamehlo kaRosen kubandakanya ukugqithisela ityala kwiziko elitsha njengembuyekezo yemali ethile. Ityala elipheleleyo le-AT & T ye- $ 168.9 yezigidigidi lincitshiswe ngesiquphe ngaphezulu kwe-15%.
Okwangoku, akunakwenzeka ukungahoyi ukuba i-roller-coaster ride Abasebenzi beWarnerMedia bayithathile kule minyaka mithathu idlulileyo. Emva kohlengahlengiso oluphezulu kunye nolungelelwaniso lombutho, kubandakanya nokugxothwa kwabaphathi bexesha elide kunye nomnyango ojikelezayo wemisebenzi emitsha, inkampani ijongene nolunye uhlengahlengiso olubalulekileyo. Kuyadinisa.
Impahla yeqhinga lokusebenza iWarnerMedia kunye nokuFumanisa kuzisa etafileni
Iindaba ezimnandi zezokuba olu dityaniso ubukhulu becala lumalunga nokudityaniswa kweziqwenga ezongezelelweyo. Ukufumanisa ukuthengiswa kweendleko ngexabiso eliphantsi, ixabiso lokubhabha elingenakubhalwa ngokungathi libhalwe Umtshato weentsuku ezingama-90 . I-WarnerMedia inerekhodi ende kunye nesitayile seprogram yeprimiyamu ukusuka kwiWarner Bros. blockbuster iifilimu kwilayibrari ye-HBO yodumo lweTV kunye nokunye. Ludibaniso olongezayo ngokudibana okungaphantsi kunokuthi, Ukufunyanwa kweDisney yeFox . Ezi nkampani zimbini zinephothifoliyo ebanzi yeeprogram zehabhu.
Nanku apho izinto zikhohlisayo, nangona kunjalo. Omabini la maziko asenendawo ebonakalayo kumabonakude alinganayo. Icandelo leWarnerMedia's Turner Broadcasting (i-TNT, i-TBS, i-CNN) kunye nokusebenza kweentambo ezinje nge-HBO kuyigcina ibotshelelwe kwindawo yelifa njengoko kwenza i-Discovery Inc. ngeDiscovery Channel, Animal Planet, Science Channel kunye ne-TLC.
Ngaphandle kokuba iWarnerMedia-Discovery ngequbuliso ikhule ngamaphiko, akucaci ukuba zingakanani iziqhoboshelo zabo kwimidiya yelifa abaya kuba nakho ukubuyisa ixabiso elibalulekileyo.
Ngokufumanisa okukokwakhe Ingxelo yomvuzo Inkampani yeyona iphothifoliyo yeTV ehlawulelwayo e-US kwaye yafumana i-67% ye-2.79 yezigidigidi zeedola kwingeniso ye-2020 evela kuthungelwano lwasekhaya. Oku kuyenza ukuba inkampani edityanisiweyo ukuba iye kwimigangatho yexabiso elibalulekileyo ukusuka kwishishini elinomda, elisemi kubathengi abazizigidi ezingama-74 e-US Kodwa ngaphezulu kwezigidi ezi-6 zabathengi bakhetha ukusika intambo unyaka nonyaka kwaye imodeli ibambekile ekwindla . Ngaphandle kokuba iWarnerMedia-Discovery ngequbuliso ikhule ngamaphiko, akucaci ukuba zingakanani iziqhoboshelo zabo kwimidiya yelifa abaya kuba nakho ukubuyisa ixabiso elibalulekileyo.
Ayisiyo yonke intshabalalo kunye nobumnyama nangona. Ukufunyanwa kunokunika iWarnerMedia inqanaba elikhulu lempembelelo phesheya kwezilwandle ngamajelo ase-Australia naseNew Zealand (I-HBO Max iceba ukukhutshwa kwiimarike zamanye amazwe ngeli hlobo.) Kwindawo yosasazo kwezemidlalo, ukudibanisa iTurner Sports neDiscovery yeEurosport inokubanakho ukuba amandla amakhulu kwishishini. Njengoko sibonile kwiminyaka yakutshanje, amalungelo osasazo kwezemidlalo aphakathi kwezona zinto zixabisekileyo kwinkqubo yendalo yeTV.
Kodwa kwenzeka ntoni ngemizamo yenkampani entsha yokusasaza? Ukufumanisa +, okuphehlelelwe ngoJanuwari, kuqokelele ngaphezulu kwababhalisi abazizigidi ezili-13 ukuza kuthi ga ngoku kwaye ukuFumanisa kuye kwangaphezulu kwababhalisi be-D2C abayi-15 yezigidi. I-HBO Max (eyasungulwa kunyaka ophelileyo) kunye ne-HBO inabadibanisi abayi-64 yezigidi kwihlabathi liphela. Ngaba ukuFumanisa + kunye ne-HBO Max ngequbuliso baba yinyanda ezimbini? Ukudityaniswa kwamaqonga ekubonakala ngathi awahlukanga kusebenze imimangaliso kwiDisney, ebonisa ubukhulu bokukhula kwayo kwiDisney + yayo, iHulu kunye ne-ESPN +. Okanye, ngaba inkampani esandula ukudityaniswa idibanisa zombini iinkonzo zayo zokusasaza ukwenza iqonga elinye ngokubanzi kwi-Netflix? Ngaba iziko elitsha leWarnerMedia-Discovery liya kugcina abasebenzisi ngaphakathi kokusasaza kwendalo kunye nebhulorho phakathi Imidlalo yeethrone kwaye Flip okanye Flop ?
Sele ibhengeziwe ukuba i-HBO Max izakukhupha inqanaba elixhaswa ziintengiso kweli hlobo, lihletywe ukuba lixabiso $ 9.99 ngenyanga . Ukufumanisa + sele kubonelela ngeendlela ezimbini ze-AVOD kwi- $ 4.99 kunye ne- $ 6.99 ngenyanga. Kuhleli ukuba kubonwe ukuba iinkonzo zosasazo ezahlukileyo ziya kuphathwa njani ukuya phambili. Kodwa ngokudibeneyo, nangayiphi na indlela ayithathayo, ime ithuba elingcono lokuhlela indlela yayo kumdlalo wokugqibela Amaqonga amathathu ukuya kwamahlanu e-SVOD ashiyeke emile .
Ubunkokheli obutsha beWarnerMedia-Discovery yintshukumo
Kuxelwe kwiindawo ezininzi ukuba u-CEO we-Discovery u-David Zaslav uzakuqhuba inkampani edityanisiweyo njenge-CEO ngelixa u-Jason Kilar, ophethe i-WarnerMedia CEO unyaka omnye kuphela, uya kukhokelela kwinkampani ethe ngqo ngqo kubathengi. Nokuba injongo kukunika i-Kilar ubukhosi obujolise ngakumbi ekulawuleni, kunzima ukungayiboni le nto njengento yokwehliswa. Ubhubhane ukhawulezise utshintsho lwaseHollywood ukuya kusasazo, uguqula ishishini elijolise ngqo kubathengi kuyeyona nto ibalulekileyo.
Ukanti uZaslav, ogcina ubudlelwane obuqinileyo nentloko ye-CNN uJeff Zucker kunye noLiberty Media kaJohn Malone (oyena mntu wabelana ngezabelo kwiDiscovery Communications) ngequbuliso uzifumana eyintloko yezona ndawo zikhulu zemithombo yeendaba kwezolonwabo kwihlabathi. Ngeli xesha, uKilar uphulukana nolawulo kumdlalo weqonga kunye nenethiwekhi.
QAPHELA 12: 48 pm: Ngokwe- INew York Times , UJason Kilar uthethathethana ngokuphuma kwakhe eWarnerMedia.
I-NBA yeDisney yeHlabathi yokuVulwa kwakhona, ichaziwe
Izinto ezintandathu ezinokuthi zenze iRiphabhlikhi yaseGuwari yePrayimari yaseNJ ngo-2017
IiCredits ezongeziweyo: Kuphi kwenye indawo onokuJonga kuyo abaDlali bakho abaDlalwayo 'beMidlalo yeTrone'?
Ngaba uHillary Ngokwenyani unokuKhethwa ngakumbi kunoBernie?
khangela inombolo yefowuni
Ngelixa ikatala yam ilila kamnandi amazwi enkosana
x -ifayile ayinakuphinda yenzeke
Amagcisa aphezulu kunye azayo ngo-2016
Uphi umastandi ngoku